ModernDeck, mpanjifa Twitter ho an'ny desktop na mpitety tranonkala | Ubunlog
ModernDeck, mpanjifa Twitter ho an'ny desktop na mpitety tranonkala
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hijery ny ModernDeck isika. Ity dia mpanjifa Twitter loharano maimaim-poana sy malalaka izay hita ho an'ny Gnu / Linux, Windows ary MacOS. Ity rindranasa ity dia mandeha amin'ny TweetDeck, saingy mampiseho interface tsara ho an'ny mpampiasa aingam-panahy avy amin'ny Material Design, ary manampy endri-javatra fanamboarana vaovao ihany koa.
Ity fonosana TweetDeck ity noforonina tamin'ny Electron ary navoaka teo ambanin'ny fahazoan-dàlana MIT. Ny fampiharana dia manambatra ny herin'ny TweetDeck amin'ny fampiasana mora andrasana amin'ny mpanjifa Twitter.
1 Endri-javatra ankapoben'ny ModernDeck
2 Mametraka ModernDeck amin'ny Ubuntu
2.1 Amin'ny alàlan'ny Flatpak
2.3 Fanitarana ho an'ny mpitety tranonkala
Endri-javatra ankapoben'ny ModernDeck
ModernDeck dia misy amin'ny fiteny maro sy sehatra samihafa.
Rehefa manomboka ny fandaharana dia toa tsara kokoa ny interface tsara raha oharina amin'ny fampiharana Twitter ofisialy. Ny GUI dia natao haseho amin'ny tabilao, ahafahan'ny mpampiasa manamboatra sy manetsika azy ireo araka izay mety indrindra amintsika.
Ny interface dia tabilao misy ny rohy rehetra tiantsika ampiana, izay haseho eo amin'ny faritra ankavia, manome fidirana haingana sy mora.
Ny tena mampiavaka an'ity mpanjifa ity dia avy amin'ny safidy fanamboarana maro azo alaina. Izany dia ahafahantsika mampifanaraka ny haben'ny tsanganana sy ny lahatsoratra, ny endri-tsoratra, ny habe sy ny endrik'ireo sary mombamomba ary ny lohahevitra ankapobeny, ankoatra ny zavatra maro hafa.
Hamela antsika koa izanyamboary ny fihetsiky ny Tweets, izay midika fa mamela ny rindranasa hivezivezy amin'ny fotoana tena izy, milalao GIF ho azy na mamela antsika hanitsy feo fanairana.
Ny programa dia hanome antsika fahafahana hampiasa fitambaran-kitendry, izay ahafahana mampiasa ity programa ity amin'ny fomba tsotra.
Ny zavatra iray hafa ahafahan'ny programa mamela antsika hatao dia manafatra mivantana ny toe-javatra, ary noho izany dia mitahiry fotoana kely configuring ny endriky ny fandaharana.
Raha izany no tianao esory ny teny sy andian-teny tsy hiseho amin'ny fahanaTsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny fizarana voatokana fotsiny izy ireo, ao amin'ny Settings Program.
Mametraka ModernDeck amin'ny Ubuntu
Ity fampiharana ity Hitantsika azo alaina amin'ny fonosana AppImage sy Flatpak izy io. Ankoatra izany dia hanana ny safidy ny ampiasao ity mpanjifa ity ho an'ny Twitter avy amin'ny navigateur web, mampiasa ny fanitarana azo alaina ho an'ny navigateur malaza indrindra.
Raha te hametraka ity programa ity ianao ho fonosana Flatpak izay azo jerena ao amin'ny Flathub, ilaina ny mamela ity teknolojia ity ao amin'ny rafitrao. Raha mampiasa Ubuntu 20.04 ianao nefa mbola tsy manana izany dia afaka manohy ianao The Guide fa mpiara-miasa iray no nanoratra tao amin'ity bilaogy ity taloha kelin'izay.
Rehefa afaka mampiasa ity karazana fonosana ity amin'ny rafitrao ianao, dia ilaina ny manatanteraka ity baiko manaraka ity amin'ny terminal (Ctrl + Alt + T) mba apetraho ny programa:
Aorian'ny fametrahana dia azonao atao atombohy ny programa mitady ny mpandefa azy amin'ny solosainay na manatanteraka ny baiko:
Raha tianao izany esory ity programa ity napetraka ho fonosana Flatpak, ny hany ataonao dia manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary mihazakazaka ao:
Raha liana amin'ny fanandramana ity fampiharana ity ho AppImage ianao dia azonao atao alaivo avy amin'ny pejy famoahana tetikasa. Ho fanampin'izay, azonao atao ny misintona ny kinova farany navoaka androany, manokatra terminal (Ctrl + Alt + T) ary manatanteraka izany. wget toy izao manaraka izao:
Rehefa vita ny fampidinana ny rakitra, ny hany sisa tavela dia ny mankany amin'ny lahatahiry misy azy. Rehefa tonga any isika dia hanao izany hanova ny fahazoan-dàlana amin'ny rakitra miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Aorian'ny baiko teo aloha dia afaka atombohy ny programa amin'ny fipihana indroa eo amin'ny rakitra na amin'ny fanoratana amin'ny terminal:
Fanitarana ho an'ny mpitety tranonkala
Ny fahafahana hafa izay tsy maintsy ho afaka mampiasa ity programa ity dia ny fampiasana ny fanitarana ho an'ny mpitety tranonkala atolotra ao amin'ny tranokalan'ny tetikasa. Ao no ahitanao ny fanitarana ho an'ny navigateur Chrome, Firefox y Edge.
Raha mampiasa Twitter tsy tapaka ianao ary te hanana safidy fanamboarana sy fanasokajiana bebe kokoa amin'ny mpanjifanao, mety hahaliana anao ny manandrana ModernDec.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » ModernDeck, mpanjifa Twitter ho an'ny desktop na mpitety tranonkala
Canonical dia nanambara ny fanavaozana ny Snapcraft
Tonga ny Firefox 96 miaraka amin'ny fanatsarana ny horonan-tsary, fanitsiana amin'ny SSRC, WebRTC ary tabataba kely